NGABE UKUPHUZA IKHOFI KULUNGILE ESIBINDI? - IMVUBABAZON.COM - IMPILO
Ngabe Ukuphuza Ikhofi Kulungile Esibindi?
Ikhaya Ezempilo Ukuphila kahle Wellness oi-Abasebenzi Ngu Abasebenzi ngoNovemba 17, 2017
Izikhathi eziningi kungenzeka ukuthi wezwa ukuthi ukuphuza kakhulu i-caffeine akulungile empilweni yakho kodwa futhi wazi ukuthi ukuphuza ikhofi ngemali elinganiselwe kungaba yinhle nasempilweni yakho.
Ucwaningo olusha luthole ukuthi ukuphuza izindebe ezintathu kuya kwezihlanu zekhofi njalo kunganciphisa ingozi yomdlavuza wesibindi nokuqina kwesibindi.
'Isifo sesibindi siyanda futhi kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi ikhofi, esinye seziphuzo esithandwa kakhulu emhlabeni, kanye nokudla esisithinta kanjani lesi sifo,' kusho uGraeme Alexander, wase-University College London e-UK.
mahalaya amavasya 2019 usuku nosuku
'Ucwaningo lukhombisa ukuthi ikhofi linganciphisa ubungozi bezifo zesibindi futhi kubalulekile ukuthi iziguli zikwazi ukuthola imininingwane yezokudla nezeluleko ezivela kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo ngendlela okulula ukuthi bayiqonde futhi basebenze ngayo,' kusho u-Alexander.
Ukuhlaziywa kwe-meta kuphakamise ukuthi ukusetshenziswa kwekhofi uma kuqhathaniswa nokungasetshenziswa kwekhofi kuhlotshaniswa nokunciphisa ingozi engamaphesenti angama-40 yomdlavuza wesibindi, yize lokhu kubonakala kungubudlelwano obuxhomeke kumthamo.
Ucwaningo oluvela e-US nase-Italy lukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwekhofi kuhlala kuhlotshaniswa nengozi encishisiwe ye-cirrhosis, nokuncipha kobungozi okungaba ngamaphesenti angama-25-70, ngokusho kombiko.
Kukhona nolunye ucwaningo oluphakamisa ukuhlangana okuphambene phakathi kokusetshenziswa kwekhofi nobungozi besifo esingalapheki sesibindi, ngokuncishiswa okulinganiselwe kwamaphesenti angama-25-30 kubathengi bekhofi eliphansi, kuze kufike kumaphesenti angama-65 kubathengi bekhofi ephezulu.
'Isifo sesibindi singumbulali othule ngoba kaningi azikho izimpawu kuze kube yilapho sekwephuze kakhulu,' kusho uJudi Rhys, weBritish Liver Trust. 'Ikhofi yinto efinyeleleka kalula kuwo wonke umuntu futhi ukuyiphuza njalo - ehlungiwe, esheshayo noma i-espresso - kungenza umehluko ekuvimbeleni futhi, kokunye, kunciphise ukukhula kwesifo sesibindi,' kusho uRhys.
Umbiko usanda kwethulwa eRoyal Society of Medicine eLondon.
Bheka futhi izindlela ezimbalwa ezinhle zokugcina isibindi sakho siphilile.
1. Ukudla okunempilo:
Ukugwema ukudla okunamafutha kuyadingeka uma ufuna ukugcina isibindi sakho siphilile. Faka ukudla okucebile okunezintambo eziningi njengezithelo, imifino, okusanhlamvu okuphelele ekudleni kwakho. Kuyasiza ekugcineni isibindi sakho siphilile.
2. Ukuzivocavoca Njalo:
Ukuvivinya umzimba njalo kuyadingeka uma ufuna ukuhlala uphilile. Lokhu akusizi nje ekunciphiseni isisindo kepha kuyasiza nasekuvikeleni izingqinamba eziningi zezempilo kubandakanya nesifo sesibindi.
3. Gwema Utshwala:
Utshwala bungabeka ingozi enkulu esibindini sakho uma uzitika ngophuzo oludakayo. Ukuphuza ngokweqile kungalimaza amangqamuzana wesibindi futhi kuholele ekuvuvukeni noma ekuqhekekeni kwesibindi okungaholela ekuqhumeni kwesibindi. Uma inganakekelwa ingashintsha ibulale futhi.
I-Lemon ngesinye sezithako ezingcono kakhulu zokukhipha ubuthi ohlelweni. Ungangeza amaconsi ambalwa wejusi likalamula etiyeni lakho eliluhlaza noma ungangeza nakwisaladi lakho. ILamula lisiza isibindi ukuthi sikhiqize inyongo futhi sikhiphe ubuthi.
iphakethe lobuso lesikhumba esikhanyayo esikhanyayo
uju emehlweni ukuthuthukisa ukubona
kanjani ukusebenzisa uwoyela sesame izinwele
amakhambi asekhaya okuba nesilungulela ekukhulelweni
kanjani ukususa izindebe ezingenhla izinwele ngokwemvelo